Lammileen Itoophiyaa 64 Mozaambiikitti ukkaamamanii du'an awwaalaman - BBC News Afaan Oromoo
Lammileen Itoophiyaa 64 Mozaambiikitti ukkaamamanii du'an awwaalaman
Magaalaa Teetee, kan yeroo mara godaantonni seeraan alaa keessa qaxxaamuran
Aanga'oonni kutaa biyyaa Lixa Mozaambiik, Teetee lammileen Itoophiyaa 64 konteenara keessatti ukkaamfamanii du'an awwaaluu isaanii himan.
Konkolaataan isaan keessatti ukkaamamanii du'an namoota 78 fe'ee Malaawii irraa gara Mozaambiik kan qaxxaamure yoo ta'u namoonni 14 qofatu lubbuun hafe.
Namoonni lubbuun hafan kunneen koronaavaayirasiif qoratamanii bilisa ta'uun isaanii mirkanaa'ullee qaama gubaa akka qaban himameera.
'Eenyummaan namoota 64 Mozaambiikitti du'anii adda baafamaa jira'
Namichi masgiida keessatti namoota 51 ajjeese yakka isaa amane
Waa'ee qondaalaa nageenyaa Naqamteetti ajjeefamanii waan beeknu
Dubbi himtuun Tajaajilaa Godaansaa Biyyaalessaa Mozaambiik Ameeliyaa Direeyitoo lammileen Itoophiyaa qilleensa dhabuun konteenara keessatti ukkaamfamnii du'uu hin oolle kunneen, awwaalamuu himan.
"Reeffi isaanii lakkaa'amee, eenyummaan isaanii adda baafamee jira. Imbasiin Itoophiyaas tajaajila godaansaa kutaa bulchiinsa Teetee qunnamee jira."
Kanneen lubbuun hafan adeemsa keessa darban qabu kan jedhan aanga'aan kun, hojii kana Imbasii Itoophiyaa fi Dhaabbataa Godaansaa Idil-addunyaa (IOM) waliin ta'uun hojjetaa jirra jedhan.
Imbasiin Itoophiyaa tajaajila godaansaa kutaa biyyaa Teetee quunnamus himaniiru.
Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa ibsa Kamisa ganama baaseen Imbasiin Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa jiru kanneen du'an hunduu lammilee Itoophiyaa ta'uu isaanii mirkaneeffachuu beeksisee jira.
Imbasichi eenyummaa namoota du'anii adda baasuu kan danda'e deeggarsa warra lubbuun hafaniin akka ta'es ministeerichi himeera.
Namoota lubbuun hafan 14'f Imbasiin Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa jiru, IOM fi mootummaan Mozaambiik waliin ta'uun deeggarsa gochaafi akka jiraniifi akkuma waraqaa ittiin imalan argataniin gara biyyaa akka deebifamanis himeera.
Dhimma du'a lammilee Itoophiyaa 64 kanaan wal qabatee lammileen Mozaambiik lama to'annoo jala oolu mootummaan Mozaambiik beeksiseera.
Lammileen Mozaambiik gocha yakka akka godaantota seeraan alaa gargaaruu fi haalaa lubbuu isaanii gaaga'uu danda'uun geejjibsiisuu irraa akka of qusatanis hubachiiseera.
Madda suuraa, GIANLUIGI GUERCIA
Aadde Ameeliyaa Direeyitoo akka jedhanitti konkolaachisaan yeroo gaafatamu konkolaataa dhaabuu didee ture.
Bara darbe lammiileen Itoophiyaa 14 taha Konteenerii fe'umsa meeshaaleef oolu keessa galuun karaa seeraan alaa Tanzaaniyaadhaa ka'anii Afrikaa Kibbaa galuuf osoo yaalanii ukkaamamanii qilleensa dhabuun isaanii ni yaadatama
Haleellaa Kiraayisticharch: Namichi masgiida keessatti namoota 51 ajjeese yakka isaa amane
Namichi maqaan isaa Bireentoon Tarraant jedhamu waggaa darbe magaalaa Kiraayisticharch, biyya Niiwuu Ziilaand keessatti masgiida seenuun haleellaa raawwateen namoota 51 ajjeese yakka isaa amane
Gamtaan Afrikaa sarbama mirgaa naannoo Tigraay qorachuuf
Joo Baayidan fi Vilaadmiir Putiin walga'ii Jenevaatti maal dubbatan?
Eertiraan 'UN maqaa na balleessaa jira' jechuun himatte
Awustraaliyaatti lolaan erga mudateen booda manneen sarariitii dirree uwwise